Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Moustafa: Misy misoloky ho mpanao gazety
Raharaha Moustafa: Misy misoloky ho mpanao gazety
Heverina fa tsaroan’ny maro ilay karana nisy nitifitra teny amin’ny manodidina an’Ambatobe hidina an’Analamahitsy, herinandro vitsy lasa izay. Voatifitra izy io fa tsy maty. Nalefa notsaboina sy nodidiana any ampitan’ny ranomasina.
Amin’izao fotoana, mitohy ny famotorana an’io raharaha io. Hatramin’ny fianakavian’i Moustafa no anaovana famotorana, hoy ny loharanom-baovao.
Tato ho ato anefa dia re fa misy olona misandoka ho mpanao gazety ka tonga any amin’ny fianakavian’i Moustafa, ary mandrahona fa hoe « havoakanay an-gazety io raharaha io, izay fantatray ny vontoatiny, raha tsy omenareo vola izahay ». An-jatony tapitrisa no re fa takian’io olona misoloky mpanao gazety io.
Tsy miaro na iza na iza amin’izany izahay fa saro-piaro amin’ny hasin’ny asa fanaovan-gazety kosa. Tsy ekena ny itondrana ny anaran’ny mpanao gazety na ny orin’asa fanaovan-gazety amin’ny raharaha maloto toa izany.
Niezaka nifanontany aloha ny samy mpanao gazety omaly raha mahatsikaritra olona mety ho nahavanona an’izany fisolokiana izany. Ny mombamomba an’io mpisoloky io no re avy amin’ireo velon-taraina taminay mpanao gazety, saingy tsy mbola tsikaritra na tojo an-tsaina aloha.
Ny tsikaritra ny mpanao gazety sasany kosa anefa dia toa any ambonimbony any na any amin’ny tontolon’ny famotorana any no mety ho niavian’io iraka hanao asa fisolokiana amin’ny anaran’ny mpanao gazety io, mba hahazoan-dry zalahy volabe. Misy milaza mihitsy ary fa mpitandro ny filaminana ihany no ao ambadika ?
Nahoana re raha ianareo any ambony any, izay manana fahefana momba izany raharahan-keloka izany no mandeha mivantana mitaky vola any fa tsy ny anaran’ny mpanao gazety no hosolokiana toa izany e ?
Efa maromaro ihany ireo orinasa fanaovan-gazety eto amintsika no tratran’ny fisandohana ohatr’izao.
Ho hita eo raha hanana fahasahiana hanameloka ka hitaky ny marina momba izao raharaha izao ny filohan’ny Holafitry ny mpanao gazety, satria isan’ny miseho azy ho sarotiny amin’ny fiarovana ny asa fanaovan-gazety eto izy.
Lalam-pifidianan: Hitarika rotaka sy krizy pôlitika indray
Nahoana no hampiadiana indray ny samy Malagasy ? Lalàm-pifidianana natao handresen’ingahy Hery Rajaonarimampianina amin’ny taona 2018 indray no navoakan’ny filakevitra ny minisitra tany Mahajanga ny faran’ny herinandro lasa teo. “Fihodinana voalohany hono dia vita !”
Resabe amin’ny tontolon’ny pôlitika sy ny mpanaraka ny raharaham-pirenena ny lalàm-pifidianana izany. Na dia mbola holaniana any amin’ny Antenimierampirenena ao Tsimbazaza ity lalàna ity dia efa mandeha sahady ny ady hevitra fa hitarika korontana sy krizy vaovao amin’ny resaka pôlitika eto Madagasikara ity raharaha ity.
Santionany iray izay be mpiresaka amin’ity volavolan-dalàm-pifidianana ity ny mahakasika ny fiantohan’ny olom-boafidy miisa 200 ny mpilatsaka iray vao izay vao afaka milatsaka hofidina ho filoham-pirenena. Io filazana io dia midika avy hatrany ho fanakanana ny mpilatsaka hafa ankoatra ny HVM ( Hery vaovao ho an’i Madagasikara) izay nanolotra an’ingahy Hery Rajaonarimampianina izay filoham-pirenena amin’izao fotoana izao.
Mazava ny resaka ankehitriny fa fanjakana tsy refesi-mandidy no misy ankehitriny na mpanao didy jadona. Mazava ny tiana hotanterahana amin’ny tetika maloto io satria ny HVM no antokom-panjakana izay manana olom-boafidy be indrindra manerana an’i Madagasikara.
Amin’izao fotoana izao dia mazava koa ny tetika nataon’ny fanjakana Hery Rajaonarimampianina izay nanongana ny ben’ny tanàna maro manerana ny nosy izay tsy HVM ka nosoloiny ny olony. Hatramin’izao fotoana izao dia mbola mitranga izany fanonganana izany.
Mazava koa ny resaka mahakasika ny antony anaovana mpandrindra ny HVM isam-paritra ho lehiben’ny faritra amin’izao fotoana izao. Hanery ireo ben’ny tanàna sy ny olom-boafidy manerana ny faritra iadidiany izy ireny.
Mazava ny voalazan’ny gazety iray mpiseho isan’andro nivoaka omaly alatsinainy faha 26 novambra 2017, fa nisy tandapa iray avy eny Iavoloha nanambara fa efa vita ny fifidianana ary mandresy amin’ny fihodinana voalohany ingahy Hery Rajaonarimampianina.
Io tetika ratsy io no anton’izany. Hitarika rotaka sy krizy vaovao nefa izany; Marihina fa be dia be no tsy hanaiky ity tolo-dalàna ity ny mpanao pôlitika sy ny olona maro izay naheno azy io omaly. Misy aza no milaza hoe aleo ho tonga izany dia ho hita eo ny tohiny. Ratsy dia ratsy tokoa ho an’ny firenena raha izany tokoa no mitranga indray ka tokony handinika tsara ny fanjakana alohan’ny hamoahana azy ity.